Wakiilo katirsan Beesha Caalaamka oo maanta kusii jeeda Dhuusomareeb iyo Ujeedka socdaalkooda | Allbanaadir.com
Home GALMUDUG Wakiilo katirsan Beesha Caalaamka oo maanta kusii jeeda Dhuusomareeb iyo Ujeedka socdaalkooda
Wakiilo katirsan Beesha Caalaamka oo maanta kusii jeeda Dhuusomareeb iyo Ujeedka socdaalkooda
Wakiilo katirsan beesha caalamka ayaa lagu wadaa in maanta gaaraan magaalada Dhuusomareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug, waxa ayna wakiiladan la kulmi doonaan madaxweynaha maamulkaasi.
Xubnaha beesha caalamka ee tagaya magaalada Dhuusomareeb waxaa hogaaminaya Wakiilka Qaramada Midoobay ee Arrimaha Soomaaliya Amb, Jemis Swan, waxa sidoo kale xubno ka ah safarka xubno kale oo katirsan beesha caalamka ee soomaaliya jooga.
Ujeedka safarka wakiilka Qaramada Midoobay ku tagayo caasimada Galmudug ayaa lagu sheegay dadaalo uu ku doonayo xal u helida khilaafka ka taagan doorashada Soomaaliya iyo sidII maamulada u qaban lahaayeen doorasho raali lagawada yahay.
Jemis Swan ayaana Madaxweynaha Galmudug kala hadli doona xaalada Siyaasadeed ee dalka gaar ahaan khilaafka ka taagan doorashada iyo guddiyada lagu muran san yahay, waxa uuna Wakiilka u gudbin doonaa Qoor Qoor aragtida beesha caalamka.
Wakiilka Qaramada Midoobay iyo wakiilada kale ee beesha caalamka ayaa sidoo kale la filayaa in ay tagaan qaar kale oo kamid ah xarumaha dowlad goboleedyada si ay ugala soo hadlaan khilaafka ka dhashay doorashada .
Previous articleAmaanka Muqdisho oo faraha kasii baxaya iyo ciidamada amaanka oo howlgalo bilaabay
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo Wada Qorshe Cusub & Ciidanka DF oo Qabiil U kala Saftay
Madaxweyne Farmaajo oo laga diiday in Ciidamada Danab u adeegsado Banaan bixii Muqdisho